Otu esi eyi ihe nkpuchi
Ihe ndị a bụ ezigbo ụkwụ iji kpuchie ihe nkpuchi: 1. Mepee nkpuchi ahụ ma debe obere imi ahụ n'elu wee jiri aka abụọ dọpụ ụdọ ntị. 2.Jide ọnụ-mgbochi megide agba gị iji kpuchie imi na ọnụ gị kpamkpam. 3.Wepụ aka-ntị na ntị gị ma mezie ha ka ị nwee nkasi obi ...
Ọnụ ọgụgụ zuru oke nke ngwaahịa mgbochi ọrịa
Ebe ọ bụ na convid-19 gbasara ngwa ngwa na mba ọzọ, iwu maka mgbochi nje sitere na mba dị iche iche agbawaala. Dabere na ọnụọgụ ego anyị, kemgbe ngwụcha ọnwa Febụwarị afọ a, ọtụtụ ngwaahịa ndị na-egbochi ọrịa na-ebupụ ịrị elu nke ukwuu. Ruo ọgwụgwụ nke July, anyị na-ebupụ a ngụkọta valvụ nke US ...
Hazie Ihe Otiti Etiti Etiti Etiti
N'oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ azụmaahịa nke Yiwu Sandro nwere nzukọ 2020 nke etiti afọ iji nyochaa oke arụmọrụ arụmọrụ na ọkara mbụ nke afọ a, ma mesie ike na-elekwasị anya na ọkara nke abụọ nke afọ 2020. Nzukọ ahụ sochiri ihe omume ụlọ na-akpali akpali. . All ọrụ atte ...
Ihe ndị a bụ ezigbo usoro iji kpuchie ihe nkpuchi: 1. Mepee nkpuchi ahụ ma debe obere imi ahụ n'elu wee jiri aka gị dọọ aka na ntị. 2.Jide ihe nkpuchi megide agba gị iji kpuchie imi na ọnụ gị kpamkpam. 3.Dọta ntị-ntị n'azụ ntị gị ma dozie ha ka ị nwee ahụ iru ala. ...
Ebe ọ bụ na convid-19 na-agbasa ngwa ngwa na mba ọzọ, iwu maka ngwaahịa mgbochi ọrịa sitere na mba dị iche iche agbawaala. Dabere na ọnụọgụ ego anyị, kemgbe ngwụcha ọnwa Febụwarị afọ a, ọtụtụ ngwaahịa ndị na-egbochi ọrịa na-ebupụ ịrị elu nke ukwuu. Ruo mgbe ngwụcha ọnwa Julaị, anyị na-ebupụ ...
N'oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ azụmaahịa Yiwu Sandro mere nzukọ 2020 nke etiti afọ iji nyochaa oke arụmọrụ arụmọrụ na ọkara nke mbụ nke 2020, ma mesie ike ọrụ nke ọkara nke abụọ nke 2020. Ihe omume ahụ sochiri ọrụ ndị na-akpali akpali. Ndị ọrụ niile gara ...
Igwe nkpuchi, Nkpuchi Ahụ, Nkpuchi ihu ihu, Nkpuchi, Kn95 Nkpuchi ihu, Akwa nkpuchi,